Ku Soo Dhawaada Hootsuite: Laxanka, Falanqaynta, iyo Cusboonaysiinta Daryeelka Macmiilka | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Dhawaan ku imaanaya Hootsuite: Laxanka, Falanqaynta, iyo Cusboonaysiinta Daryeelka Macmiilka
Dhawaan ku imaanaya Hootsuite: Laxanka, Falanqaynta, iyo Cusboonaysiinta Daryeelka Macmiilka
Waxaan ka soo gudubnay qeybtii hore ee 2021 kooxdayaduna waxay shaqaynaysay habeen iyo maalinba si ay kuu keenaan astaamo cusub oo xiiso leh.
(*Ma aha run ahaantii saacad kasta, waxaanu qiimaynaa caafimaadka dhimirka ee shaqaalaheenna, laakiin aad ayay u shaqaynayeen, aad bayna ugu dadaalayeen inay natiijooyinka kula wadaagaan.)
Akhri si aad u ogaato waxa dhawaan ku soo socda waayo-aragnimadaada Hootsuite-waxaan rajeyneynaa inaad jeclaan doonto! Kahor intaanan quusin, waxaan rabay inaan ku bilaabo dib u habeynta diiradayada sanadkan:
Hal Hootsuite: Waxaan ka shaqeyneynaa inaan bixino khibrad isticmaale oo isku xiran oo la habeeyey agabka ay macaamiisheena u baahan yihiin si ay u guuleystaan.
Hagitaan shaqsiyeed: Waxaan ku kordhineynaa macne badan iyo karti waxqabad si aan macaamiisha u siino taageero badan iyadoo la adeegsanayo sifooyinka iyo shaqeynta la heli karo.
Qoto dheer ee shabakada bulshada: Sida shabakaduhu sii wadaan inay horumaraan, waxaanu si adag uga shaqaynaynaa inaanu bixino awoodaha kanaalka ugu casrisan.
Socod-socodka shaqada waqti-badbaadinta: Tani waa mudnaanta fog ee kooxahayada wax soo saarka si ay u caawiyaan macaamiisha kordhinta hufnaanta, wax soo saarka, iyo iskaashiga.
Kordhinta: Waxaan sii qoto dheereyneynaa diiradayada is dhexgalka laba-geesoodka ah ee nidaamyada ugu muhiimsan macaamiisheena.
Nadiifi ROI: Waxaa naga go'an inaan ka caawinno dhammaan macaamiisheena inay cabbiraan guusha hindisahooda warbaahinta bulshada.
Lacag la isku daray iyo mid dabiici ah: Waxaan sii wadeynaa inaan ka shaqeyno abuurista waayo-aragnimo aan kala go 'lahayn ee maaraynta ololayaasha lacagta lagu bixiyo iyo waxyaabaha dabiiciga ah si wadajir ah Hootsuite.
Marka aynu sii eegno mustaqbalka xalalkayaga waxaynu diiradda saaraynaa saddex baaldi oo kala duwan marka loo eego mudnaantayada. Hadda, kan xiga iyo kan dambe.
Muddada gaaban, waxaanu diirada saarnay inaanu adiga, macaamiisheena, u dejino inaad guulaysato anagoo bixinayna hal, khibrad isku xidhan. Waxaan rabnaa inaad dareento kalsooni adoo isticmaalaya bulsho, kaa caawinta inaad kordhiso wacyiga sumadda iyo ka qayb qaadashada macaamiisha. Waxaan rabnaa inaan awoodno inaan ku siinno khibradda ugu fiican macaamiishaada oo aan kaa caawinno abuurista iyo kobcinta hoggaan.
Marka xigta, waxaan ku dadaaleynaa inaan noqono goobta ugu waxtarka badan uguna fahansan booskeena anagoo bixinayna macnaha guud iyo waxqabadka gudaha goobta Hootsuite. Hadafkayagu waa inaan kaa caawino inaad kordhiso jacaylka sumadda oo aad fahan fiican u yeelato macaamiishaada iyo suuqyadaaga.
Horay u socoshada, waxa aanu maskaxdeenna ku haysanaa in aanu soo bandhigno waxqabadkaas aan la qiyaasi karin. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad noqoto qayb muhiim ah oo ka mid ah kaydka suuq-geynta oo aad noqoto mid kugu baratama gudaha booskaaga, kaa caawinta inaad sare u qaaddo ROI-gaaga oo aad soo jiidato, haysato oo aad horumariso kartida sare.
Waxaan rajo ka qabnaa sida safarkani uu nooga caawin doono inaan sii wadno kor u qaadida nafteena si aan kuugu heer sarrayno macaamiisheena ahaan.
Tilmaamaha cusub iyo isbeddelada ayaa loo kala saaray shan kooxood oo muhiim ah: Isku xirka macaamiisha, sirdoonka dhijitaalka ah, firfircoonida shaqada, yaraynta khatarta, iyo khibrada Hootsuite.
Hootsuite, waxaan rabnaa inaan diirada saarno inaan kaa caawino inaad dhisto xiriiryo macno leh oo aad macaamiishaada iyo rajadaada ka geliso warbaahinta bulshada.
Gaar dhagaystayaashaada wakhtiga saxda ah
Ciyaaro mala awaal dambe ma jiro. Dhawaan, Hootsuite waxay awoodi doontaa inay kuu sheegto goorta aad la wadaagto qoraalladaada bulshada. Waxaan ku daraynaa waqtiyo lagu taliyay in lagu daabaco Qorsheeyaha iyo Laxanka si aad si kalsooni leh u gaarto dhagaystayaashaada waqtiyada ugu fiican si aad u kordhiso ka qaybgalka.
Iyada oo la soo jeedinayo waqtiyada ugu wanagsan ee la daabaco ee loogu talagalay Instagram, Facebook, Twitter, iyo profiles Linkedin, Laxanka ayaa ku siin doona saddex jeer oo xog-daabac ah oo aad ku dhejiso maalin la doortay.
Kaliya dooro midka adiga kuugu fiican. Haddii aad dooratay hal muuqaal oo bulsheed oo ku yaal laxanka si aad ugu dhejiso, waxaad arki doontaa boos gaar ah. Haddii aad ku dhejinayso in ka badan hal profile hal mar, Hootsuite waxay ku siin doontaa waqti kala duwan.
Talooyinku waxay u eegi doonaan waxoogaa ka duwan Hootsuite Planner. Toddobaad la bixiyay, Hootsuite Planner waxa kale oo uu had iyo jeer soo bandhigi doonaa saddexda jeer ee lagu taliyay ee keenay ka-qaybgalka ugu sarreeya ee ku salaysan xogtaada taariikheed. Markaad gujiso mid ka mid ah wakhtiyada lagu taliyey ee gudaha Qorsheeyaha, waxay ku geyn doontaa waayo-aragnimada laxanka (wakhtiga aad dooratay ee hore) si aad u dhamaystirto boostadaada.
Isticmaalka falanqaynta horumarsan, Hootsuite waxay soo saari doontaa wakhtiyada ugu fiican ee lagu daabaco nuxurka iyadoo lagu saleynayo xogtaagi hore ee waxqabadka hawlgelinta (jeceshay, faallooyinka, iwm.) 30-kii maalmood ee la soo dhaafay.
Si waxtar leh ula xiriir macaamiishaada gudaha sanduuqa
In ka badan 60% ururada ayaa qorsheynaya inay kordhiyaan maalgashigooda Instagram sanadka 2021, sida ku cad Warbixinta Dijital ah ee 2021. Sababtan awgeed, waxaan rabnaa inaan u fududeyno macaamiisha inay la falgalaan waxyaabaha ku jira Instagram isla markaaba Hootsuite Inbox.
Marka hore, waxaanu samaynaynaa fariimaha tooska ah ee Instgram-ka mid lagu heli karo hab habaysan oo dhan Q3.
Waxaan sidoo kale wanaajin doonaa habka isgaarsiinta adiga iyo macaamiishaada annagoo awood u siinaya ka qaybgalka faallooyinka Instagram-ka dadweynaha iyo jawaabaha gudaha Hootsuite Inbox. Faallooyinka dadweynaha ee Instagram iyo jawaabaha waxay diyaar u noqon doonaan dhammaan qorshayaasha Hootsuite Pro (iyo wixii ka sareeya) isticmaalayaasha sanduuqyada. Tani ma khusayso Instagram reels iyo IGTV faallooyinka iyo jawaabaha.
Si fiican u fahan jaangooyooyinkaaga bulsho
Weligaa ma la kulantay cabbir bulsho oo aadan hubin? Macnaha dheeraadka ah ee ku jira warbixinahaaga iyadoo loo marayo summada su'aasha ee ku xigta summada dejinta waxay kuu oggolaanaysaa inaad si fudud u gasho faahfaahinta cabbirka.
Macnaha dheeraadka ah ayaa sharxi doona sida mitirka loo xisaabinayo, ama wuxuu bixin doonaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa cabbiraadda mitirka. Tan waxa lagu heli doonaa Falanqaynta dhexdeeda.
Markaad gujiso faahfaahin dheeraad ah, waxaad awoodi doontaa inaad hesho macnaha guud ee cabbirka oo ay ku jiraan:
Bogga vs. cabbirka boostada
Lacag bixinta vs. xogta organic
Waqtiga la isticmaalay
Faham sida dhagaystayaashaadu u isticmaalaan macluumaadka
Qaabka aadka loo sugayo ee buuxa ee cabbirada Twitter-ka ee ka-qaybgalka API (kaaso ay ku jiraan cabbirrada sida caadiga ah loo isticmaalo sida aragtiyaha, ka-qaybgalka, retweets-ka, kuwa ugu cadcad, xigashada tweet-ka, jawaabaha, iyo muuqaalka muuqaalka) ayaa lagu dari doonaa Falanqaynta.
Tani waxay si buuxda u soo koobaysaa warbixintayada Twitter si aadan ugu baahnayn inaad ku tiirsanaato falanqaynta hooyo si aad uga warbixiso waxqabadka macluumaadkaaga Twitter.
Sirdoonka dhijitaalka ah
Waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad fahamto sida astaantaada loo arko, la qabsato beddelka dabeecadaha macaamiisha, oo aad ka sii hor mariso isbeddellada warshadaha.
Dhis su'aalo adag si aad u hesho xogta saxda ah
Hagaajinta Raadinta La Hagayo waxay ku salaysnaan doontaa jawaab celinta imtixaannadayada beta ee socda bisha Luulyo. Kobcinta Raadinta La Hagayo ee Cusub waxay kuu oggolaan doontaa inaad wax ka beddesho raadinta qaab la hagayo, si toos ah ugu caddeyso ilaha xogta la beegsaday, iyo agabka su'aallaha horay loo buuxiyay.
Aad baanu ugu faraxsanahay raadinta cusub ee la hago sida ay u xalinayso mid ka mid ah dhibcaha xanuunka ugu weyn ee macaamiisheena ay ku hayaan raadinta boolean.
U doodista shaqaalaha iyo iibinta bulsheed waxay noqdeen diiradda weyn ee hay'ado badan. Waxaan rabnaa inaan ku siino qalabka aad u baahan tahay si aad awood ugu siiso xooggaaga shaqada si ay u gaaraan macaamiisha iyo rajada, oo aad ka caawiso kobcinta xiriiryo badan.
Si fudud u hel nuxurka khuseeya dhagaystayaashaada
Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad ku shaandhayso nuxurka luqad ahaan.
Tani waa war weyn oo loogu talagalay hay'adaha ay barnaamijyadooda u doodista shaqaalahooda ay ku jiraan waxyaabaha ku qoran luqado kala duwan. Ku kala shaandhee luqadaha waxay u sahlaysa isticmaalayaasha inay ku shaandheeyaan waxa cusub ama jira luqad ahaan.
Farsamada loo isticmaalo ogaanshaha luqadda ayaa ka caawin doonta isticmaaleyaasha inay si fudud u ogaadaan oo u wadaagaan waxa ku jira luqadda iyaga iyo dhegaystayaashooda khuseeya.
Qaybta ugu fiican? Cusboonaysiintan ayaa u sahlaysa Amplify isticmaalayaasha inay dhex maraan iyaga oo aan ku darin wax shaqo ah oo dheeri ah oo loogu talagalay maamulayaasha. Nidaamku wuxuu si toos ah u ogaan doonaa luqadda boostada kasta iyadoo la adeegsanayo barashada mashiinka, markaa maamulayaashu maaha inay gacanta ku dhejiyaan luqadda ay doorbidayaan boostada kasta oo ay ku abuuraan Amplify.
Waxaa naga go'an inaan bixino qalabka aad u baahan tahay si aad u ilaaliso macaamiishaada, u sugo hantida summadaada, oo aad u hoggaansanto sharciyada khuseeya
Deji rukhsad si aad u maamusho sawirka astaantaada
Waxaan ku daraynaa ogolaanshiyaha hore ee "Jawaab-bixiye" cusub, oo ay heli karaan Kooxaha, Ganacsiga, iyo qorshayaasha ganacsiga. Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dejiso rukhsad si aad u xakamayso cidda ka tirsan ururkaaga oo awood u leh inay faallo ka bixiso oo u jawaabto dhagaystayaasha ku hawlan macluumaadkaaga bulsheed, adoon lahayn awood aad ku abuurto xog cusub oo saafi ah.
Iyada oo qayb ka ah ballanqaadkeenna ah inaan ku bixinno khibradda ugu wanaagsan gudaha Hootsuite, waxaan soo saaraynaa saddex sii dayn oo xiiso leh Q3 2021 si aan gacan uga geysanno hagaajinta guud ahaan waxtarka madal oo aan u soo bandhigno khibrad isticmaale oo wanaagsan oo leh warbixinno go'an, hagaajinta waayo-aragnimada laxanka, iyo siidaynta qaabka mugdiga ee mobilada.
Warbixinnada la isku dhejiyay ee Hootsuite Analytics
Marka hore, waxaanu ku dari doonaa warbixinada la isku dhejiyey iyada oo loo sii marayo bar navigation ee Analytics. Haddii aad leedahay qorshe lacag leh, waxaad awoodi doontaa inaad ku dhejiso warbixinnada marin-hawleedkaaga Falanqaynta si aad dhakhso ugu hesho warbixinnadaada ugu muhiimsan iyo aadka loo isticmaalo.
Habkani wuxuu fidin doonaa dhammaan warbixinnada ku jira Falanqaynta - oo ay ku jiraan warbixinnada kooxda, Amplify, Insights, iyo Impact si aad u habayn karto aragtidaada.
Marka xigta, waxaanu midayn doonaa waayo-aragnimada laxanka. Markaad ku daabacayso abka tusaha abka, waxa ku jira hadda waxay ku furmi doontaa laxanka cusub, halkii ay ka ahaan lahayd curiyaha dhaxalka ah.
Habka mugdiga ah ee Hootsuite's mobile app
Ugu dambeyntii, waxaan cusbooneysiin doonaa Hootsuite Mobile App. Waxaan ra'yi-celintaada ka qaadannay nooca abka ee aanu siidaynay bishii July ee la soo dhaafay waxaana aanu siin doonaa hab mugdi ah isticmaalayaashayada si aad si fudud ugu kala baddasho abka. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad doorato interface-ka aad door bidayso: 'Madaw' ama 'Iftiin' - taasoo sahlaysa in la akhriyo wakhti kasta oo maalinta ah.
Ma doonaysaa in aad wax badan ka barato mid ka mid ah sifooyinkan iyo waxa aad ku gaadhi karto bulsho ahaan? Weydiiso inaad aragto Hootsuite oo ficil ku jira muujinta tooska ah ee caadada ah.
Si fudud ugu maamul dhammaan warbaahintaada bulshada hal meel iyo waqti ku badbaadi Hootsuite.
Iskuday si bilaash ah
Hagaha Suuqgeynta Pinterest: Sida loo Hormariyo Ganacsigaaga 2021
Sida loo Xaliyo Barnaamijka Beta waa ka buuxa Play Store on Android